Vaovao - BXL Creative Nahazo mari-pankasitrahana famonosana 4 amin'ny fifaninanana Mobius Advertising Awards
Vorona vonona hihinana RealWarm ...
Guojiao 1573 Toaka
Hatsarana mandrakizay an'i Dunhu ...
MISS DEER Perfume ala
Kitapo fikolokoloana hoditra
Carambola remover makeup
Hatsaran-tarehy hatsarana-fanatanjahan-tena hoditra C ...
Labozia manitra efatra Seasons
Nahazo ny "Best Works Award" sy "Gold" telo ho an'ny famolavolana fonosana tamin'ny fifaninanana Mobius Advertising Awards 2018 ny BXL Creative, nametraka ny firaketana tsara indrindra tao anatin'ny 20 taona tany Chine. Io ihany koa no orinasa tokana mahazo loka any Azia.
Ny hevitra an'ity famolavolana ity dia avy amin'ny tranobe mifandraika amin'ny fiainana. Ny fonosana ivelany dia nanolotra ny firafitry ny trano misy teboka roa. Voalohany, manana ny mampiavaka azy i Huanghe Lou. Faharoa, misy ny fiteny sinoa hoe "Ny fiainana dia toy ny fiakarana tohatra amin'ny tranobe". Ny gorodona samy hafa dia samy manana ny fahitany azy. Ny mpamorona dia mamaky ny fivoriambe ary mamorona sary famantarana super fa tsy manintona amin'ny antsipiriany. Tsotra ity famolavolana ity fa tsy tsotra ary kanto sy mistery amin'ny singa taloha. Ny anaran'ny marika dia manome sary an-tsaina tsara ho an'ny mpanjifa ihany koa.
Hatramin'izao dia nahazo loka mari-pahaizana 73 tamin'ny famolavolana iraisam-pirenena isika. Ela vao nijoro teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Rehefa miha matanjaka hatrany i Shina dia miha manandanja kokoa ny tsena sinoa ho an'ny marika maro any ampitan-dranomasina, ekena sy ankafizin'ny olona maro manerantany ny singa kolontsaina sinoa. Miaraka amin'ny tanjona hitondrana ireo singa kolontsaina sinoa amin'ny sehatra famolavolana an'izao tontolo izao, eo an-dàlana hatrany i BXL Creative.
Manaraka: BXL Creative Packaging Guizhou Factory sonia ofisialy!